Muwaadiniin ka soo carartay Yemen oo soo gaaray Boosaaso “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Muwaadiniin Soomaali ah oo isaga soo cararay dagaalada ka taagan dalka Yemen ayaa soo gaaray dekadda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari, kuwaasi oo isugu jiray rag, dumar iyo carruur.
Muwaadiniinta Soomaaliyeed oo tiradoodu ahayd 260-qof ayaa qaarkood lagu waday gawaarida loogu talagalay dadka aan lixaadkooda dhameystirneyn iyo kuwa kale oo qabay xunuuno kala duwan.
Maamulka gobolk Bari ee maamulka Puntland, waxgarad, , ganacsato, dhallinyaro, haween, saraakiil, xildhibaanno, ayaa dadkaasi kusoo dhaweeyay dekedda, iyadoo la siiyay markiiba cunnooyin, biyo iyo dawo.
Abshiro oo ka mid ah muwaadiniinta dalka Yemen ka soo cararay oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa tilmaamtay in Soomaalida ay dhibaatooyin badan ku qabaan dalka Yemen, iyadoo codsatay in gurmad loo fidiyo dadka weli ku xaniban rabshahada ka taagan Yemen.
Duqa magaalada Boosaaso, Xasan Cabdalla Xasan oo isna warbaahinta kula hadlay gudaha dekedda Bosaso ayaa sheegay in dadka ka soo cararaya dagaallada Yemen oo isugu jira Soomaali iyo Ajaanib kale ay u diyaariyeen meelo ay degaan, ayna ku dadaallayaan sidii dadkaasi gurmad loogu fidin lahaa.
Guddoomiyaha Cusub ee Degmada Hodan oo Xilka la wareegtay"Sawirro"